Admin_John – Page 105 – Daily Feed MM
အချစ်ဖွဲ့လေညှင်းမှာ အသံဝဲလွန်းတယ်လို့ သရုပ်ဆောင် သင်္ဂ ီထွန်း ဝေဖန်ခံနေရ
Admin_John | May 2, 2020
လက်ရှိ MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ “ အချစ်ဖွဲ့လေညင်း ” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ဓနုလူမျိုး အမျိုးသမီးတယောက် အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သိင်္ဂီထွန်းကို သူ့ရဲ့ အသံထွက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လတ်တလောမှာ ဝေဖန် တိုက်ခိုက်မှုတွေ အများကြီးရှိလာတယ်လို့ သိင်္ဂီထွန်းက ပြောပါတယ်။ “ကျမတို့က သရုပ်ဆောင်လေ။ မြန်မာကား ရိုက်တာ၊ ဓနုကား လာရိုက်တာ
အလုပ်ရှင်ဆီကနေအကြွေးနဲ့ ထီထိုးရာမှထီဆုကြီးပေါက်သွားတဲ့ မစန်းစန်းနွယ်
အလုပ်ရှင်မှ ကွမ်းသီးပွဲရုံအလုပ်သမတွေကို ထီဖိုးငွေစိုက်ထားပေးပြီး အဆင်ပြေမှ အရစ်ကျ ပြန်ဆပ်စနစ်ဖြင့် ထီထိုးပေးရာမှ သိန်း(၁၀၀)ဆုပေါက်သိန်း(၁၀၀)ကံထူးရှင်ကတော့ မော်လမြိုင်မြို့ သီရိမြိုင်(၁၂)လမ်းမှ မစန်းစန်းနွယ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ အလုပ်လုပ်တဲ့ အလုပ်ရုံကတော့ မော်လမြိုင် စမ်းကြီးရပ်မှ ဦးနေဝင်းသူရဲ့ (NWT)ကွမ်းသီးပွဲရုံ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲရုံအလုပ်သမလေးတွေက ထီတစောင်(၁၀၀၀) ပေးထိုးဖို့ တော်တော် စဉ်းစားရတဲ့ အခြေအနေပါ။ မိသားစု စားဝတ်နေရေး
Admin_John | April 21, 2020
အမြင်မှန်ကြလို့ အမှန်မြင်ကြပြီ “ကျမ ထိုင်းကနေမြန်မာဖက် မြဝတီကိုပြန်ရောက်ပြီး မြဝတီမှာ Quarantine ၂၁ရက်နေရမယ် ဆိုတော့ အလွန်စိတ်ညစ်ခဲ့ပြီး ဒီစခန်းကိုရောက်ရှိတဲ့နေ့မှာငါတို့တော့ထောင်ကျပြီလို့ခံစားလိုက်ရပါတယ် ကျမလေ…ထိုင်းမှာ ၅ နှစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်မိသားစုတွေအဖေအမေတွေနဲ့တွေ့ချင်စိတ်ကအရမ်းပြင်းထန်နေချိန်မှာဒီစခန်းမှာ ၂၁ ရက်နေရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ရှင် ကျမလိုပဲအားလုံးဟာစိတ်ညစ်နေကြပါတယ် ဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်တာ…. ကျမတို့ကိုမနက်စာ၊နေ့လည်စာ ၊ ညစာထမင်း ၃ နပ်ကျွေးတယ်၊ဆာတဲ့အချိန်စားဖို့ဆိုပြီးမားမားခေါက်ဆွဲထုတ်တွေအပြည့်ထားပေးတယ်၊အိုဗာတင်း၊ကော်ဖီ၊အအေးတွေကိုလည်းတစ်နေ့ ၃ ကြိမ်လောက်တိုက်ကျွေးကြတယ် ကျမတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းနေ့စဉ် ၂ ကြိမ်စစ်ဆေးတယ်၊ကျမတို့တတွေကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုပြီးမနက်ပိုင်းညနေပိုင်းကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခဏ်းတွေလုပ်ရပြန်တယ်
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး မေတ္တာနဲ့ ပြည်တော်ပြန်လာကြမယ့် စာသင်သားရဟန်းများရဲ့ ကြည်နူးဖွယ်မြင်ကွင်း
ဗီဒီယိုဖိုင်ကို အောက်မှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ COVID_19 ရောဂါက ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများကို ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဘယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါစေ မိခင် နိုင်ငံဆီကို ပြန်ကြတာပါပဲ။ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတောင် မြန်မာနိုင်ငံက သွားပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ ထို့အတူပဲ အိန္ဒိယမှာလည်း ကူးစက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ မြန်မာနိုင်ငံက စာသင်သားရဟန်တွေလည်း များစွာရှိနေပါတယ်။ သူတို့အတွက် ဘယ်သူများ
၂၁ ရာစု မိန်းကလေးများအနေနဲ့ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ ဗဟုသုတများ
Admin_John | April 20, 2020
ခေတ်ကြီးက တိုးတက်တာ မြန်ဆန်နေပါတယ်နော်။ ရှေးခေတ် မိန်းကလေးတွေလို အိမ်မှာပဲ နေလို့ ရတဲ့ ခေတ်လည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေလည်း မြင့်တက်လာလျက်ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေကတော့ ရှေးရိုးစွဲ အမြင်တွေကနေ ဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေရတုန်းပါ။ “မိန်းကလေးဆိုတာ” ကနေ အစချီပြီး မိန်းကလေးဆိုတာ ဒီလို ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး လူတွေက သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ တကယ်က
မနက်ဖြန်ည ၉ နာရီကျော်ရင် ကြယ်မိုးတွေ ရွာမည်
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၆ ရက်မှ ၂၅ ရက်နေ့ အတွင်းမှာတော့ Lyra လို့ခေါ်တဲ့ ဗျက်စောင်းပုံစံ ကြယ်တာရာအနီးမှာ ကြယ်မိုးတွေ ဆွေရွာလာဖို့ ရှိနေပါတယ်။ Lyrid Meteor Shower လို့ ခေါ်ဆိုကြပြီး ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ အများဆုံး ကြွေကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြယ်ကြွေတယ် ဆိုတာကတော့
လေးစားမှတ်သားဖွယ်ရာကောင်းသော သီတဂူဆရာတော်ကြီး၏ မြင့်မြတ်သောဆုံးမစကား
ဘာသာပေါင်းစုံညီညွတ်ရေး အကြောင်းပြ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို တစ်ခြားဘာသာတွေနဲ့ တန်းညှိဖို့ လုပ်နေသူတွေ နားလည်ကြပါစေ။ ကြေးလည်း သတ္တု၊ ရွှေလည်း သတ္တု ဆိုပြီး ဘယ်သူမှ တန်းတူဈေးထားပြီး မရောင်းဘူး။ အိုင်ဖုန်းလည်း ဖုန်း၊ ဟွာဝေးလည်း ဖုန်းဆိုပြီးဘယ်သူမှ တန်းတူဈေးထားပြီး မရောင်းဘူး။ ခွေးဘီလူးလည်း ကား၊ မာစီးဒီးလည်း ကား ဆိုပြီး ဘယ်သူမှ တန်းတူဈေးထားပြီး
သင့်ဖူးစာရှင် ဘယ်သူလည်း သိချင်ရင် ဒီနည်းအတိုင်း စမ်းကြည့်ပါ
Admin_John | April 16, 2020
မိမိရဲ့ဖူးစာရှင်ကိုကြိုတင်တွေ့ဖူးချင်ကြတာဟာ လူတိုင်းပါပဲ…။ ဒါကြောင့် အိပ်မက်ထဲမှာ ဖူးစာရှင်ကိုတကယ်ပဲ မြင်ရမလားဆိုတာ သိရအောင် ကြားဖူးတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေ မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ် …။ ပထမဆုံးဗေဒင်ဆရာအချို့ပြောပြတဲ့နည်း လမ်းလေးကတော့ ဥတစ်လုံးကြက်သွန်ဖြူ သုံးလုံးကို ဆားရေနဲ့ပြုတ်ပေးရမယ်တဲ့။ ပြီးတဲ့ အခါ ကျက်သွားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူတွေကို တဝက်စီကိုက်စားလိုက်ပါ …။ ကျန်တဲ့ဟာတွေကို ခေါင်းအုံးအောက်မှာထည့်ထားပြီး မအိပ်ခင် မှာ နှင်းဆီရနံ့ရေမွှေး ကိုဆွတ်ပီးမှအိပ်ပါတဲ့။
သူမ Crush နေတဲ့ ဆရာကို ရအောင်ယူခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူမလေး
မိန်းကလေးတိုင်းမှာ အပျိုဖော်မဝင်ခင် သစ်ရွက်လှုပ်ရင် ရယ်တတ်တဲ့ အရွယ်ကတည်းက သူတို့မှာ အိပ်မက်စိတ်ကူး မင်းသားလေးတွေ ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်နော်။ ကိုယ့်ချစ်သူလေးက ဘယ်လိုလေး ဖြစ်ချင်မလဲ။ အရပ်ရှည်ရှည် အသားဖြူဖြူ ခပ်သန့်သန့်လေးဆိုပြီး တွေးတွေးပြီး ကြည်နူးရတဲ့ အပျိုဖော်ဝင်စ အရွယ်လေးဟာလည်း မက်မောစရာလေးပါပဲ။ အခု ပြောပြပေးမယ့် မိန်းကလေးရဲ့ စိတ်ကူးအပ်မက်ကလေးကတော့ တစ်မျိုးထူးဆန်းပါတယ်။ သူများတွေလို ရွယ်တူကို နှစ်သက်စွဲလမ်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့
Admin_John | April 15, 2020
“ရတနာသုံးပါး ဂုဏ်ကျေးဇူး”ကြောင့်ဝူဟန် ဗိုင်းရပ် ရောဂါ မှ “သေရွာပြန်”ခဲ့သူ တစ်ဦး အကြောင်း” ကျွန်တော် ခံစားခဲ့ရတဲ့ “ဝူဟန်းဗိုင်းရပ်”အကြောင်းလေးပါ။ ဘာကြောင့်-ဝူဟန်း ကျွန်တော့် ဆီကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာသလဲ? မလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင် ဆိုတာ နဲ့မလှုပ်နိုင်ဘဲ “နာရီပေါင်း (၁၄၀) ကျော်” ကိုမခံသာတဲ့ “မရာဏာပိဒုက္ခ” ကိုကျော်လာခဲ့ပုံအတွေ့အကြုံလေးပါ။ ပထမဉီးဆုံး-“သေရွာပြန်”ခဲ့တာ ဟာ “ရတနာသုံးပါး
Newer 1 … 103 104 105 106 Older
သွေးထွက်နေတဲ့ လိပ်ခေါင်းဖြစ်ပါစေ ၇ ရက် နဲ့ အမြတ်ပြတ်စေမယ့် ဆေးနည်း
နှာခေါင်းအမြဲပိတ်ပြီး နှာရည်အမြဲကျနေတဲ့ သူငယ်ချင်း ပျောက်ခဲ့တဲ့ ဆေးနည်း
အပ်မှိုကြိုက်သူတွေ အတွက် ကျန်းမာရေး သတိပေးချက် တစ်ခုထုတ်ပြန်
အဖွား.. ဘိုးဘွားရိပ်သာ မသွားချင်ဘူးဆိုပြီး မျက်ရည်တွေ ကျလာတယ်..